Tag: istockphoto | Martech Zone
Stock Footage Sites: Mhedzisiro, Vhidhiyo Vhidhiyo, uye Mifananidzo
China, December 24, 2020 Mugovera, Kubvumbi 10, 2021 Douglas Karr
B-roll, stock stockage, midhiya enhau, mimhanzi, mavhidhiyo ekumashure, shanduko, machati, 3D machati, 3D mavhidhiyo, vhidhiyo infographic matemplate, kurira mhedzisiro, vhidhiyo mhedzisiro, uye kunyangwe yakazara vhidhiyo matemplate evhidhiyo yako inotevera anogona kutengwa online. Sezvo iwe urikutarisa kugadzirisa yako vhidhiyo kuvandudza, aya mapakeji anogona kunyatso kumhanyisa yako vhidhiyo kugadzirwa uye kuita ako mavhidhiyo kutaridzika zvakanyanya kuve nyanzvi mune chidimbu cheiyo nguva. Kana iwe uine hunyanzvi tech savvy, iwe ungatoshuvira kukwira
Izvo Zvese Nezve Mifananidzo
China, June 7, 2012 Chitatu, June 6, 2012 Jenn Lisak Golding
Mavhiki mashoma ega ega kana zvakadaro ini ndiri kubheja mukuru wangu kuzadza bhajeti remifananidzo yemastock. Iko hakuna chidimbu chemukati chatinozvigovera isu pachedu kana vatengi vedu icho chisina imwe mhando yemumiriri mufananidzo, graphic, kana yakasarudzika graphic yakapihwa kwairi. Tinoziva, mberi Martech Zone, kuti kana isu tikasarudza chifananidzo chakakura kuti titore pfungwa yedu, vashanyi vazhinji vaverenge, vagovane, uye vawedzere kutaura pane zvirimo. Vanhu vakabatikana mazuvano